Ny fahafantarana ny fomba andoavam-bola isaky ny tsindry ny fikarohana ara-organika | Martech Zone
Alakamisy Janoary 22, 2015 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Nentina tao aminao isan'andro izy amin'ny alalàn'ny marketing marketing… tsy mila mandoa tsindry ianao. Ataovy ho tena izy, manorata votoaty tsara, zarao amin'ny media sosialy - ary amin'ny fomba mahagaga dia hipoaka tampoka eo am-baravaranao ny varotra. Sa hanao izany izy ireo? Manohy mitory amin'ny mpihaino ahy aho fa tsy mpanelanelana na oviana na oviana io, fa ny fomba ahafahan'izy ireo manome sakafo na mifanara-dia. Raha toa ka Search Engine Optimization mifampitaha amin'ny Search Engine Marketing ary Pay Per Click, misy synergy tsy mampino amin'ny fampiasana azy roa ireo.
Ny podcast manaraka ataontsika Edge an'ny Radio Web hiresaka momba io lohahevitra io ihany koa ireo antony hafa tokony hampiasain'ny orinasanao vola amin'ny Pay Per Click.
Teny fanalahidy mamadika - Raha manomboka amin'ny làlan'ny fanoratana atiny ianao hahazoana laharana, inona no hosoratanao? Inona ireo teny lakile tsara indrindra hanova ny fifamoivoizana indrindra? Orinasa betsaka loatra no tsy mahalala… manao fikarohana momba ny indostria sy ny mpifaninana aminy ary manome lisitra iray. Avy eo mandritra ny volana maro dia mampihatra loharanon-karena an-taonina izy ireo hahazoana laharana amin'izany. Angamba mahazo laharana izy ireo… mba hahitana fa tsy misy olona miovaova amin'ny tranokalan'izy ireo. Raha tokony hampiasa an'io fotoana sy angovo io amin'ny votoatiny sy ny fikarohana biolojika izy ireo, dia mety nandany vola kely tamin'ny karama isaky ny tsindry ary raha ny tena izy dia nosedraina ireo teny mitambatra mba hahitana izay nanova ny tsara indrindra. Raha vantany vao fantatrao hoe iza no niova fo, dia afaka manoratra, mizara ary mampiroborobo ny atiny momba ilay lohahevitra ianao hanatsarana ny laharan'ny fikarohana ary hampihena ny vidinao isaky ny mitarika.
SerP Real Estate - Efa nitady vokatra na marika lehibe ve ianao ary gaga nahita fa nandoa dokam-barotra tamin'ny vokatra na ny marika ry zareo? Misy antony roa mahatonga an'io… ny voalohany dia ny tsy hampiasan'ireo mpifaninana aminy valiny. Saingy ny antony mahasarika kokoa dia ny fampitomboanao ny taha-tsindry amin'ny pejy Search Engine (Page SERP) na dia eo amin'ny toerana avo be ianao! Rehefa laharana voalohany ianao dia azonao atao ny mampisondrotra ny tahan'ny tsindrio (CTR) hatramin'ny 50%, ny doka PPC miaraka amin'ny laharana 2 ka hatramin'ny 4 dia mety hampiakatra CTR hatramin'ny 82%, ary ho an'ny laharana ambany 5 dia hampitombo ny CTR 96% eo ho eo !
Avy amin'ny Search Engine Land - Fikarohana Google: Na dia misy laharana laharana voajanahary # 1 aza, ny dokam-barotra aloa dia manome tsindry fanampiny 50% fanampiny:
Taham-panovana - Rehefa avy manindry ny SERP ny mpampiasa ary tonga eo amin'ny tranokalanao, dia mety ho hitanao fa, ankoatry ny fifamoivoizana mivantana, ny fivezivezena mitady karama dia manana ny sandany avo indrindra sy ny taha ambony indrindra amin'ny taham-panovana. Zava-dehibe tokoa izany ary tsy maintsy apetrakao Analytics araho tsara ary araho tsara ny fampielezan-kevitrao tsirairay. Tsotra ny teôria ao ambadik'izany - rehefa vonona hiova ireo mpampiasa motera fikarohana dia mitsambikina amin'ny SERP izy ireo ary tsindrio ny valiny avo indrindra.
remarketing - Tombony lehibe iray ananan'ny PPC noho ny paikadinao SEO dia ny tombony amin'ny famerenam-barotra. Ny dokam-barotra dia mikendry dokam-barotra ho an'ny olona izay efa nitsidika ny tranokalanao (saingy tsy nividy) tamin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra manokana na tolotra manokana. Miaraka amin'ny Google Adwords, ohatra, afaka mamorona fanentanana manerana ny fikarohana ianao ary na dia ny tranokalan'ny antoko fahatelo izay hampiseho ny dokao aorian'ny fahatongavan'ny mpitsidika iray eo amin'ny tranokalanao ary avy eo dia lasa. Matahotra aho sao tsy afaka manaraka olona toa izany amin'ny fikarohana organika ka tombony lehibe.
Aza ajanona ny fikarohana karama. Satria nitombo ny paikadin'ny atiny, dia masiaka ny fifaninanana - mitaky tetibola hampiroboroboana ny fanovana. Ampirisihiko ianao hanakarama matihanina (raha tsy izany dia ho lanin'ny taham-bola mihoatra ny takatry ny saina ny teti-bolanao!). Manandrama fitambarana taonina, ampiasao fomba fanao tsara indrindra, enjeho ireo teny fanalahidy miova fo miaraka amin'ny paikady biolojika hampidina ny vidiny isaky ny mitarika, ary hamadika ny vahoaka amin'ny orinasao. Ny karama isaky ny kitiho dia sakaiza akaiky indrindra amin'ny fikarohana organika.
Tags: ny fihenan'ny fiovamteny fanalahidy mamadikasisin'ny radio webfanovana teny lakilevoajanaharyfikarohana biolojikamandoa isaky ny kitihoppcremarketingtany fikarohana ny moteraserpserp FNTserp trano